စာပေကျမ်းဂန် ပိဋကတ်တွေ သိုမှီးထားတဲ့ စာတိုက်သေတ္တာနဲ့ စာတိုက်ဘီရိုတွေကို ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေထဲက ဇေတ၀န်ဆောင် ပိဋကတ်တိုက်တွေထဲမှာ သိမ်းရပါတယ်။ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ထွန်းကားခဲ့တဲ့ ပုဂံခေတ်တုန်းက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ မှာတင်မကပဲ ပိဋကတ်တိုက် သီခြားတည်ဆောက်ပြီး သိမ်းဆည်းရလောက်အောင်အထိ စာပေကျမ်းဂန် ပိဋကတ်တွေ များများစားစား ရှိခဲ့ဖူးတယ်လို့ မှန်းဆရပါတယ်။
ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ အထဲမှာ သိုမှီးထားတဲ့ စာပေကျမ်းဂန်တွေကို မဆိုထားနဲ့ ကျောက်၊ အုတ်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ပိဋကတ် တိုက် အဆောက်အဦးကြီးတွေတောင်မှ မူလ ပကတိအတိုင်းမရှိနိုင်တော့ပြီ။ လုံးဝဥဿုံ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တဲ့ ပုဂံမြို့ဟောင်း မြကန်အရပ်က ထိလိုင်မင်းကြီး (ကျန်စစ်သား) ကောင်းမှု စက္ကူတိုက်နဲ့ နှောင်းခေတ်တွေရဲ့ လက်ရာအသစ်က ဖုံးလွှမ်းသွားလို့ နာမည်လောက်ပဲ အနိုင်နိုင် ကျန်ခဲ့ တော့တဲ့ ပုဂံမြို့ဟောင်းက အနိရုဒ္ဓမင်းကြီးကောင်းမှု ပိဋကတ်တိုက်တွေက ခေတ်တွေရဲ့ ပြောင်းလဲမှု သရုပ်သကန်ကို သက်သေပြနေကြတယ်။
ရှင်မဟာသီလ၀ံသ (မြန်မာသက္ကရာဇ် ၈၁၅ - ၈၈၀)
၁။ မြန်မာ့ရိုးရာ ကျေးလက် မြန်မာမှုဓလေ့များ၊ အတွဲ - ၁၊ ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၉။
၂။ သမိုင်းတံခွန်ဂျာနယ်၊ အတွဲ - ၂၊ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းကော်မရှင်၊ ၁၉၆၀
၄။ ဗျောညွှန့်၊ ကျေးလက်တေး အသံဖိုင်၊ သီဆိုသူ - ရွာစားကြီး စိန်ဗေဒါ
၅။ ဗျောညွှန့်၊ ကျေးလက်တေး အသံဖိုင်၊ သီဆိုသူ - တယော ဦးတင်ရီ
Posted by Ven. Vilasagga at 9:18 PM0comments
စာပလွေကိုဖြည်လိုက်တဲ့အခါ ပေစာကြိုးနဲ့ ရစ်ပတ်စည်းနှောင်ထားတဲ့ ပေစာထုတ်ကိုတွေ့ရပါမယ်။ အဲ့ဒီပေစာကြိုးက ရောင်စုံချည်နဲ့ ဂျပ်ခုပ်ယက်ထားတဲ့ ဗြက်တလက် မလောက် အ၀တ်ကြိုးပြားပါ။ အစွန်းတဖက်မှာ ကွင်းလျောတခုကို တပါတည်း ယက်ထားပါသေးတယ်။ ပေစာကျမ်းရဲ့ နာမည်၊ လှူဒါန်းထားတဲ့ ကုသိုလ်ရှင်နဲ့ ဆုတောင်းစာေ တွကို အင်မတန်မှ လက်ရာမြောက်အောင် ယက်လုပ်ထားပါတယ်။
အဲ့ဒီစည်းထားတဲ့ ကြိုးပြားကိုဖြည်ပြီး သစ်သားပြား ကျမ်းဖုံးနှစ်ချပ်ကို ဖယ်လိုက်ရင် အထပ်လိုက်စီထားတဲ့ ‘စာပလ္လင်’ ပေစာချပ်တွေကို တွေ့ရ မယ်။ ပေစာလို့ခေါ်တဲ့အ တိုင်း ပေပင်ရဲ့ ထိပ်ဆုံး ပေဖူးကရတဲ့ပေရွက်နဲ့ ပေစာချပ်တွေကိုလုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ တချို့က ‘ပေဖူးလွှာ’ လို့ ခေါ်ကြတာပါ။ ထန်းရွက်နဲ့လည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပေရွက်က ထန်းရွက်ထက် အရွယ်ပိုကြီးတာရယ်၊ ပိုပြီး အသားထူတာရယ်ကြောင့် စာရေးဖို့အတွက် ပိုကောင်းပါတယ်။ ထန်းရွက်ကိုတော့ အထပ်ထပ် ချည်ကြိုးနဲ့ချုပ်ပြီး မြန်မာ့ရိုးရာ ဇာတာနဲ့ ရက်ချုပ်တွေလုပ်ရာမှာ အဓိကသုံးပါတယ်။
Posted by Ven. Vilasagga at 8:12 PM0comments
ဒီကဗျာလေးထဲကပဲ စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကိုယူပြီး ဟိုတနေ့ကပဲ “ခေါင်းလောင်းသံ ငါတို့ကြား” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ စာတစ်ပုဒ် ရေးဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ ဒီထဲကတချို့ကတော့ ဖတ်ပြီးကောင်းဖတ်ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးထဲမှာတော့ အသက်အရွယ်လေးတော်တော်ရလာတော့ ဇရာဆို တဲ့လက်နဲ့ ထိုးနှက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် နာကျင်မှု (ဗျာဓိ) သံစဉ်ထွက်လာတဲ့အကြောင်းကို ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးရေးနေရင်းပဲ ဒီကဗျာလေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့တခြားတွေးတောစရာလေးတွေလည်း စိတ်ထဲပေါ်လာလို့ အနည်းအကျဉ်းချဲ့ပြီးတွေးဖြစ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီလိုတွေးခဲ့တဲ့အတွေးက ဒီနေ့ ဒီမှာပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်ထင်မိလို့ ဒီနေရာမှာနည်း နည်းပြောပြချင်ပါတယ်။
ကဗျာလေးထဲမှာ “ခေါင်းလောင်းသံ ငါတို့ကြား၊ အမျှယူစို့လား”လို့ပါတယ်။ ဒါ မြန်မာရိုးရာဓလေ့နဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။ ဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်က ရွာဦးကျောင်းမှာ တော်တော်ကြီးတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးတွေရှိတယ်။ မင်းဖြူမှန်မှန်ပြောလို့ ဆိုကြတဲ့ အလေးချိန် ငါးသောင်း ငါးထောင် ငါးရာ ငါးဆယ် ငါးပိဿာ အလေးချိန်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းကြီးလောက် မကြီးမားပေမယ့် ရွှေတိဂုံဘုရားကုန်းတော် ရာဟု ထောင့်ကဓမ္မာရုံထဲမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ခေါင်းလောင်းကြီးလောက်တော့ ရှိမယ်ထင်တယ်။ ရွာကျောင်းမှာ အဲဒီခေါင်းလောင်းမျိုး သုံးလေးလုံး ရှိတယ်။
ညစဉ်ညတိုင်း ၇ နာရီလောက်အချိန်မှာ ဆရာတော်အပါအဝင် ကျောင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကိုရင်အားလုံး ဘုရားဝတ်ကြတယ်။ ဝတ်မ တက်မီမှာ အချက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ အဲဒီခေါင်းလောင်းကြီးတွေကိုထိုးနှက်တယ်။ ခေါင်းလောင်းသံကို တစ်မိုင်ကျော်ကျော် နှစ်မိုင်လောက်က အထိ ကြားရတယ်။
အဲဒီလိုခေါင်းလောင်းကြီးတွေထိုးနှက်ရင် ရွာဦးကျောင်းက ဝတ်တက်ကြတော့မယ်လို့သိတာနဲ့ ရွာထဲက ဘုရားတရားဝါသနာထုံတဲ့ လူကြီး သူမများကလည်း ကိုယ့်အိမ်က ဘုရားစင်ရှေ့မှာ ဘုရားဝတ်တက်ကြတယ်။ အိမ်မှာရှိတဲ့သားသမီးတွေမြေးတွေကိုလည်း ဘုရားရှိခိုးဖို့ တိုက်တွန်းကြတယ်။ ဒီတော့ ခေါင်းလောင်းထိုးသံက ကုသိုလ်ပြုလုပ်ဖို့ အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံလို ဖြစ်နေတယ်။
နောက်တစ်နာရီလောက်နေလို့ ဘုရားဝတ်တက်ပြီးချိန်မှာတော့ အလှည့်ကျတဲ့ ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးပါးက ဖြစ်စေ၊ ကျောင်းသားကြီးတစ်ဦးဦးက ဖြစ်စေ၊ အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြပါကုန်လောလို့ အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ အမျှဝေရတယ်။ အခြားသော ကျောင်းသားကြီးတစ်ဦးကတော့ အမျှတစ်ခါဝေပြီးတိုင်း ခေါင်းလောင်းကြီးကို ထိုးနှက်တယ်။ အဲဒီလို ညဦးယံမှာ ဒုတိယအကြိမ်ထိုးတဲ့ ခေါင်းလောင်းသံကိုကြားပြီဆိုလျင် တော့ ကျောင်းကသံဃာတော်များနဲ့ ကျောင်းသားတွေဝတ်တက်ပြီးလို့ အမျှဝေနေပြီဆိုတာ ကြားသူများကသိထားကြတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းလောင်းသံကိုကြားတဲ့သူများက သာဓု သာဓု သာဓု လို့ ကြားရာအရပ်ကနေ ကျောင်းဆီမှန်းမျှော်ကာ သာဓုခေါ်ကြတယ်။
အဲဒီလိုအလေ့အကျင့်ဟာ လူကြီးတွေပါမက ကစားနေတဲ့ကစားဝိုင်းက ကလေးတွေအထိတောင်သက်ရောက်လို့ တလင်းပြင်မှာ စုပေါင်းက စားနေလျင်တောင် ကစားတာကိုခဏရပ်လို့ သာဓုခေါ်ကြတယ်။ လူကြီးမိဘများ ကလည်း ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေ မြေးတွေကို သာဓုခေါ်ဖို့ တိုက်တွန်းကြတယ်။
လူတွေတွင်မ က ကျောင်းမှာရှိတဲ့ခွေးတွေ၊ ရပ်ရွာထဲရှိ ခွေးတွေလည်း အော်ကြ အူကြတယ်။ အခြားအချိန်မှာ ခွေးတွေအူတာကို သိပ်သဘော မကျကျပေမယ့် ဒီအချိန် ခွေးတွေအော်တာအူတာကိုတော့ ခွေးတွေသာဓုခေါ် တာပဲလို့ လက်ခံနားလည်ပြီး ဝမ်းမြောက်ကျေနပ်ကြတယ်။ ဒါက တောရွာဓလေ့ ချစ်စရာလေးတစ်ခုပေါ့။
ဒီမှာ ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ ကောင်းမှုကောင်းရာလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့လုပ်ငန်းကို ကိုယ်ကိုတိုင်မလုပ်နိုင်တောင် ကျေနပ်တတ်ရမယ်။ အားပေး တတ်ရမယ်။ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်တတ်ရမယ်။ သာဓုအနုမောဒနာ ခေါ်တတ်ရ မယ်ဆိုတဲ့ ဓလေ့ကောင်းတစ်ခုကိုပါ။ ဒီကတဆင့်တက်ကာ သူများတွေကောင်းမှုကောင်းရာပြုလုပ်နေတာကို အတုယူပြီး ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း သူတို့လိုပဲ ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အသိမျိုးကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
အဲဒီလို သူများတွေရဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို အားပေးလိုတဲ့စိတ်ထား၊ ကိုယ်တိုင်လည်း ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လိုတဲ့စိတ်ထား တွေထွန်းကားလာပါမှ ကိုယ်နေထိုင်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လောကကြီး ပိုမိုတိုးတက်လာမယ်။ ဒါကြောင့် ကောင်းတဲ့လုပ် ရပ်ဆိုလျင် အားပေးရမယ်။ ကူညီရမယ်။ ဖျက်လိုဖျက်ဆီး မလုပ်ရဘူး။ ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်ကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်တဲ့သူရဲ့သန္တာန်မှာ ဘယ် လိုမှ သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ် မကိန်းတည်နိုင်ဘူး။
နောက်ပြီး ကဗျာလေးထဲမှာ “အမျှ ဘာကြောင့်ယူရတယ်။ ကုသိုလ်ရဖို့ကွယ်” တဲ့။ ဒီတော့ ကုသိုလ်ရဖို့ရန်အတွက် ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြု လုပ်ကြသူ၊ သာသာသာသနာအတွက်၊ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်၊ သက်ရှိကမ္ဘာလောကသားတွေနဲ့ သက်မဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးအတွက် ကောင်းရာကောင်းကြောင်း လုပ်ဆောင်ကြတဲ့သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်အားလုံးအပေါ်မှာ ကြည်နူးဝမ်းသာဖြစ်နိုင်ရမယ်။ သူလုပ်တာပဲ။ ငါလုပ်တာ မှမဟုတ်တာဆိုပြီး မနာလိုစိတ်ထားမထားရဘူး။ ဒါဟာ အရေးကြီးပါတယ်။
နောက်ပြီး “ကုသိုလ်သည် ဘယ်မှာလဲ။ ခေါင်းလောင်းထိုးနေဆဲ” တဲ့။ ခု ဒီမှာ သင်တန်းတွေကိုအပင်ပန်းခံကာ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေနဲ့ ငွေကြေးတွေကိုရင်းနှီးမြှပ်နှံကာ ဦးဆောင်ပြုလုပ်ကြတယ်။
ခုလိုသင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်း အများတကာတွေ သိ အောင်ကြေငြာအသိပေးနေတယ်။ ကြားသိသူတွေ သင်တန်းကို ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီး ကုသိုလ်အမျှတွေရယူနိင်ကြပါစေ။ ကိုယ်တိုင်မ တက်ရောက်နိုင်လည်း အင်တာနက်ကနေတိတ်ခွေတွေကတဆင့် နာကြားနိုင်ကြပါစေ။ တတ်အားသမျှ လှူးဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ကာ ကု သိုလ်ပါဝင်နိုင်ကြပါစေဆိုပြီး ကုသိုလ်ယူနိုင်ခွင့်လမ်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးနေကြတယ်။ ဒါကို သာဓုခေါ်နိုင်မယ့်သူတွေအတွက်တော့ ကုသိုလ် တွေရကြမှာ မလွဲပါဘူး။
ဒီတော့ ခုလိုသင်တန်းမှ ဦးဆောင်ဝေယျာဝစ္စပြုလုပ်ကြေသူတွေဟာ ခေါင်းလောင်းထိုးနေတဲ့ ကုသိုလ်အမျှရကြပါစေရယ်လို့ ပေးဝေနေတဲ့ ကုသိုလ်သည်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။
သို့ပေမယ့် အထူးသတိထားရမှာက ခုလို ကုသိုလ်အမျှပေးဝေနေသူတွေဆီက ကုသိုလ်ဖြစ်စေမယ့် ကောင်းတဲ့အရာတွေ၊ ကုသိုလ်သံတွေကို သာ ထွက်ပေါ်ပြန့်နှံ့စေဖို့လိုပါတယ်။ ကုသိုလ်အမျှပေးဝေနေတယ်ဆိုပြီး အချင်းချင်းမသင့်တင့် မညီညွတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသံတွေ၊ မတ ရားအလုပ်တွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အသံတွေကို ဖြန့်ဝေ ပေးသလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလျင်တော့ ဒီအသင်းကိုမှီပြီး ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ကုသိုလ်ရနိုင်မယ်မဟုတ်ပေဘူး။ အသင်းကို ဦးဆောင်နေသူတွေကလည်း ကုသိုလ်သည်တွေဖြစ်နိုင်မယ်မဟုတ်ပေဘူး။ အကုသိုလ်သည် တွေသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း သူတစ်ပါးတွေကို ကောင်းမှုတွေမျှဝေနိုင်အောင် ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြပါစေ။ ကိုယ့်ဆီမှာရှိနေတဲ့ ကောင်းမှုကောင်းရာတွေကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း သိမ်းဆည်းထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ သူတစ်ပါးကိုမျှဝေနိုင်တဲ့စိတ်ထားတွေ မွေးမြူနိုင် ကြပါစေ။ ကုသိုလ်အမျှကိုသာပေးဝေနေတဲ့ ခေါင်းလောင်းထိုးနေသူတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ ကုသိုလ်သည်တွေသာ ဖြစ်ကြပါစေ။ အကုသိုလ် သည်တွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့။
နောက်ပြီး သူတစ်ပါးတွေရဲ့ကောင်းမှုကောင်းရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ကြည်နူးကျေနပ်စွာ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုအနုမောဒနာ ခေါ်ဆိုနိုင် တဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြပါစေ။ ကုသိုလ်ဝယ်သူတွေသာ ဖြစ်ကြပါစေ။ အကုသိုလ်ဝယ်သူတွေလည်း မဖြစ်ကြပါစေနဲ့။ မုဒိတာစိတ်ထား အပြည့်အဝ ထားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ တိုက်တွန်းစကားဆိုရင်း နိဂုမ်းချုပ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ သြဝါဒအချိန်က ငါးမိနစ်ခန့်သာသတ်မှတ်ပေးထားလို့ မပြောနိုင်ခဲ့တဲ့ငယ်စဉ်က ရပ်ဓလေ့ရွာဓလေ့ ခေါင်းလောင်းထိုးကာ အမျှ ဝေတဲ့အကြောင်းကို အနည်းငယ်ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။
သရုပ်ဖော်ပန်းချီ - ဦးမြင့်အောင်
Posted by Ven. Vilasagga at 7:56 PM0comments
ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းနှင့် ဦးပဉ္ဇင်းတစ်ပါး ပြောဆို ဆွေးနွေးချက်များမှ ကောက်နှုတ်တင်ပြပါမည် ။ ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါ ထူးခြားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ် ။ အဲဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့နဲ့ အတူတူ ၀ိုင်းဝန်း ဆွေးနွေးကြရအောင် မူရင်းအတိုင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ။
ဇင်း ။ ။ တကာကြီးက အရက်သောက်တာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ရေးဖူးတယ်ဆို ၊ တကာကြီးကိုယ်တိုင်ကော အရက်သောက်သလား ။
ရွှေ ။ ။ စာအုပ်ထဲမှာ တွေ့ပါသလားဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ စာအုပ်ထဲမှာတော့ မတွေ့ပါဘူး ၊ တစ်နေရာမှာ ရေးဖူးတယ်လို့ ပြောကြတယ် ။
ရွှေ ။ ။ တင်ပါ ၊ တပည့်တော်ရဲ့ " ဖြောင့်ချက် " ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးထဲမှာ ရေးဖူးပါတယ်ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ဘာကြောင့် ရေးတာလည်း တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ ဖြောင့်ချက်ဆိုတော့ တပည့်တော်ရဲ့ အယူအဆ နဲ့ အပြုအမူတွေကို ဟုတ်မှန်အတိုင်း ဖော်ထုတ်ပြီး ရေးရမည့် တာဝန်ရှိလို့ပါ ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ဘယ်သူက ရေးခိုင်းလို့ ရေးရတာလည်း တကာကြီး ။စိတ်မရှိပါနဲ့နော် ၊ ဦးပဉ္ဇင်းက တကာကြီး ဘက်သားပါ ။
ရွှေ ။ ။ ဘယ်လို ဘက်သားပါလဲ ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ လူတွေက မဟုတ်တရုတ် စွပ်စွဲကြလေသလားလို့ ကိုယ်တိုင် ၀င်ပြီး မေးကြည့်တာပဲ ။
ရွှေ ။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘုရား ။ တပည့်တော် ဖြေပါတော့မယ် ။ ဦးပဉ္ဇင်း ရဲ့ မေးခွန်းတွေက တစ်ထိုင်တည်းမှာ သုံးခုရှိသွားပါပြီ ။ (၁) ဖြောင့်ချက်တွေကို ဘယ်သူရေးခိုင်းတာလဲ ။ (၂) အရက်သောက်တာ အပြစ် မရှိဘူးလို့ ရေးသလား ။ (၃) တကာကြီးကိုယ်တိုင် အရက်သောက်သလား ။ ဟုတ်ရဲ့လား ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ အရက်သောက်သေးသလားလို့ ဆိုလိုပါတယ် ။
ရွှေ ။ ။ မှန်လှပါဘုရား ၊ ဘယ်သူက ရေးခိုင်းသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေရလျှင် ဘယ်သူကမှတော့ အရေးမခိုင်းပါဘူး ။ သို့သော်တပည့်တော်က လောကုတ္တရာ ရေးရာအတွက် အားထုတ်နေသူ ဖြစ်တဲ့အပြင် ကိုယ်သိသမျှ မြင်သမျှလေးကို သူတစ်ပါးအား တင်ပြနေသူဖြစ်လေတော့ ကိုယ့်အပေါ်မှာ သံသယ ကင်းရှင်းသွားစေလိုသည် တစ်ကြောင်း ၊ တပည့်တော် ရဲ့ ၀ါသနာတစ်ခုက ဘယ်သူတွေလက်ခံခြင်း ၊ လက်မခံခြင်းကို အပထား ၊ ကိုယ်တိုင် စိတ်ချလက်ချ ယုံကြည်ထားတဲ့ အခြင်းအရာတစ်ခုကို တင်ပြရမှ ကျေနပ်တတ်တာက တစ်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ဖြောင့်ချက် ရေးရခြင်း အကြောင်းကတော့ ဟုတ်ပါပြီ ၊ အရက်သောက်တာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ရေးတာက ဘယ်လိုလည်းတကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ ဦးပဉ္ဇင်း က တပည့်တော်ရဲ့ ဆောင်းပါးကို ကိုယ်တိုင် ဖတ်ဖူးဟန် မတူပါဘူး ။
ဇင်း ။ ။ ဒိဋ္ဌေ ဒိဋ္ဌမတ္တံ စာအုပ်ကိုသာ ဖတ်ဖူးတယ် ၊ ဖြောင့်ချက်ကို မဖတ်ဖူးပါဘူး ၊ လူပြောသူပြောပါပဲ ။
ရွှေ ။ ။ စာကို သေသေချာချာ မဖတ်ဘဲနဲ့ ပြောကြတာပါဘုရား ။ အပြစ်မရှိဘူးလို့ မရေးဖူးပါဘူး ။ ငရဲမကြီးဘူးလို့သာ ရေးပါတယ်ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ဘာကြောင့် ငရဲမကြီးရသလဲ ၊ သုရာမေရယသိက္ခာပုဒ်ပဲ ။
ရွှေ ။ ။ ငရဲကြီးတယ် (သို့) အပါယ်ကျတယ်ဆိုတာ ဒုစရိုက် ၁၀ပါး ကျူးလွန်မှ မဟုတ်လားဘုရား ၊ သုရာမေရယ ဟာက သီလနယ်ထဲက မဟုတ်ပါလားဘုရား ။ ဒုစရိုက်မှု နဲ့ သီလက တစ်ခြားစီပါဘုရား ။ ဒုစရိုက်မှု ဆိုတာက ကျူးလွန်လျှင် အပါယ်ကျတယ် ။ သီလ ဆို
တာက ကောင်းသော အလေ့အကျင့် ဖြစ်ပါတယ် ။ အရက်သောက်ခြင်းဟာ ကောင်းသောအလေ့တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ဘုရား ။ နစ္စ ၊ဂီတ ၊ ၀ါဒိတ ဆိုတာမျိုးတွေလိုပေါ့ ။ ရှောင်လျှင်ကောင်းတယ် (သို့) ငရဲတော့ မကြီးပါဘူးဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ သို့သော် သုရာမေရယကို ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံထဲမှာ ထည့်သွင်းရမယ်လို့ အဋ္ဌကထာ ဆရာက ဆိုတယ် တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ ဒါက သူ့အယူအဆကိုးဘုရား ။ သူတစ်ပါး မယားကို ပြစ်မှားတာနဲ့ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် ၀ယ်သောက်တာ နဲ့ ဘာများသက်ဆိုင်လို့လဲဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ကာမဂုဏ် ခံစားတဲ့ သဘာဝချင်းတူတယ် တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ ကာမဂုဏ်ခံစားရုံနဲ့ ငရဲကြီးတယ်လို့ ဗုဒ္ဓက ဟောတော်မမူခဲ့ပါဘူးဘုရား ။ တစ်ချို့က ဘယ်လိုတောင် ရေးကြသလဲဆိုတော့ အရက်သောက်တဲ့လူဟာ ရသာရုံခံစားခြင်းပဲတဲ့ ။ ကိုယ်တိုင် ဘာမှ မသိဘဲနဲ့ ရမ်းပြီး ရေးချင်တဲ့ လူတွေကြောင့် ခက်တာပဲ ။
အရက်သောက်တယ်ဆိုတာ ရသာရုံခံစားခြင်း မဟုတ်တဲ့အပြင် အစ ပထမ မှာ ရှုံ့ရှုံ့မဲ့မဲ့ နဲ့ မျိုချရတဲ့ အရည်ပါ ဘုရား ။ နောက်တော့မှဇိမ်တစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီး ကြိုက်တတ်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ " ဇိမ် " ကို ကြိုက်ခြင်းပါ ။ အရသာကို ကြိုက်ခြင်း မဟုတ်ပါဘူးဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ နောက်တော့ အရသာကိုပါ ကြိုက်လာတယ်ဆို ။
ရွှေ ။ ။ ဒါကတော့ တမာရွက်ပြုတ်စားတဲ့ လူလိုပေါ့ဘုရား ။ ပထမတော့ ခါးတယ် ။ နောက်တော့မှ ကြိုက်တာပါ ။ အရက်မှာတော့ဇိမ်က အဓိက ပါဘုရား ။ ကိုယ်တိုင် မြည်းမစမ်းဘဲနဲ့ သူတစ်ပါး ပါးစပ်ထဲက အရသာကို မှန်းဆပြီး ဆရာလုပ်ချင်တဲ့ လူတွေတော့တပည့်တော် က တယ်မတည့်ဘူး ။ သုရာမေရယဟာ ငရဲကြီးတယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓက ဒုစရိုက် ၁၁ ပါးလို့ ဟောခဲ့မှာပေါ့ဘုရား ။ ၁၁ ပါးဟောလျှင်လည်း ဂဏန်းအနေနဲ့ အရုပ်မဆိုးပါဘူး ။ မီး ၁၁ ပါး တို့ ဘာတို့ ရှိသားပဲ ။ ဗုဒ္ဓက ၁၀ ပါးလို့ ဟောတော်မူခဲ့တဲ့ အထဲမှာ သီလထဲကတစ်ခုယူပြီး ကာမေသု ထဲ အတင်းသွင်း လို့ တပည့်တော်တော့ လက်မခံဘူး ။ သူ့သဘော သက်သက်ပဲ ။ ဘုရားဟော မဟုတ်ဘူး ။
ဇင်း ။ ။ လူတွေ လိမ္မာ လာအောင်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ သွင်းထည့်တာ ထင်ပါရဲ့ တကာကြီး ။ အရက်သောက်ခြင်းဟာ မကောင်းတာတော့ ၀န်ခံတယ် မဟုတ်လား ။
ရွှေ ။ ။ အတိုင်းအရှည်နဲ့ ၀န်ခံပါတယ် ။ သို့သော် လိမ္မာအောင်ဆိုပြီး အပိုခြောက်လှန့်ပေးလျှင်တော့ အမှန် (သစ္စာ)တရား ပျက်တယ်လို့ တပည့်တော် နားလည်ပါတယ်ဘုရား ။ ဥပမာ - စလောင်းဖုံး ၂ ချပ်ကိုတီးလျှင် ကျားကိုက်တတ်တယ်လို့ ရှေးကလူကြီးတွေကကလေးတွေကို ခြောက်ခဲ့တယ် ။ အမှန်ကတော့ (မြေ)စလောင်းဖုံး ၂ ချပ်ကိုတီးလျှင် ကွဲမှာစိုးလို့ပါပဲ ။ ကလေးတွေအဖို့ ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ် ။ သို့သော် လူတိုင်းဟာ ကလေး မဟုတ်ဘူးဘုရား ။ ဘာပဲပြောပြော တပည့်တော်အနေနဲ့ကတော့ ဗုဒ္ဓကမှန်တဲ့အတိုင်း ဟောထားပါလျက်နဲ့ တစ်ချို့က ဥာဏ်ကွန့်ပြီး အခြောက်တွေ ၊ အမြှောက်တွေနဲ့ ဖြည့်စွက်တာကို တပည့်တော် မလိုလားဘူးဘုရား ။ မှန်တာကို ဖော်ထုတ်ချင်တာပဲ ။
ဇင်း ။ ။ တကာကြီး က အရက်သောက်တာဟာ အပြစ်မရှိဘူးတဲ့လား ။
ရွှေ ။ ။ ဒီလို မလုပ်ပါနဲ့ ဦးပဉ္ဇင်း ။ တပည့်တော် ဥပမာဆောင်ခဲ့ပြီးကောဘုရား ။ စလောင်းဖုံး ၂ ချပ်ကိုတီးလျှင် ကျားကိုက်တတ်တယ် ဆိုတာ မဟုတ်ပေမဲ့ ကွဲတတ်တယ်ဆိုတာ မှန်သလိုပဲ အရက်သောက်ခြင်းကြောင့် ငရဲကြီးတယ်ဆိုတာ မမှန်ပေမဲ့ စလောင်းဖုံးကွဲတာလိုပဲ အပြစ်တော့ရှိတတ်တာပေါ့ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ ဧကန်စကား မဟုတ်ဘူး ။ အနေကန်စကားပေါ့ တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ အတိုင်းနဲ့အထွာနဲ့ စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ ဆိုလျှင်တော့ လူတွေထင်ကြသလို ဧရာမအပြစ်ကြီး မဟုတ်နိုင်ပါဘူးဘုရား ။ တပည့်တော်က ဒီအကြောင်းတွေကို စပြီး ရေးကတည်းက ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု ရှိပါသေးတယ် ။ အရက်သောက်တဲ့လူတွေကို အရက်မသောက်အောင် တပည့်တော် မတတ်နိုင်ဘူး ။ ဘယ်သူမှလည်း တတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ သို့သော် သောက်ကြလို့ရှိလျှင် စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ အတိုင်းနဲ့ အထွာနဲ့ အချိန်နာရီ နဲ့ သောက်ကြဖို့ သတိပေးချင် လို့ပါပဲ ။
ဇင်း ။ ။ ဘယ်လို သောက်ပုံသောက်နည်းလဲ တကာကြီး ရဲ့ ။
ရွှေ ။ ။ တပည့်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကို ဟိုတုန်းက အုပ်ချူပ်သွားတဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကို တပည့်တော်တို့ မြန်မာတွေက မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေ ၊ မျောက်ကဆင်းသက်တဲ့ အရိုင်းအစိုင်းတွေ ၊ ဘာတွေညာတွေ နဲ့ ခေါ်ချင်တတ်တယ် မဟုတ်ဘူးလား ။ သူတို့အရာရှိတွေဟာ လူတိုင်းလိုလိုပဲ အရက်သောက်တတ်တယ် ။ သို့ပေမဲ့ ဂျင်မခါနာကလပ်မှာ မူးပြီး ရန်ဖြစ်ကြတယ်လို့ ဘယ်နှစ်ခါများ ကြားရဖူးသလဲ ။ မူးလဲနေတယ်လို့ကော ကြားရသလား ။ အလုပ်ခွင်ကို အရက်မူးပြီး လာတယ်လို့ရှိပါသလား ။ ရှိတဲ့ပိုက်ဆံ အကုန်သောက်ပစ်တယ်လို့
ကော ကြားရပါသလား ။ လူကြားထဲမှာ ပြောမှားဆိုမှားဖြစ်အောင် မူးတယ်လို့တောင် ကြားရပါသလား ။ တွေ့ရပါသလားဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ဒါကတော့ သူတို့က အထက်တန်း လူစားတွေကိုး တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ တပည့်တော်ကလည်း ဇိမ်ခံချင်လို့ သောက်လျှင် အထက်တန်းလူများသောက်နည်း ၊ ဂုဏ်သရေရှိတဲ့လူများ(Gentlemen )သောက်နည်းသောက်တတ်အောင် သတိပေးချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါဘုရား ။ တပည့်တော် ရဲ့ အယူအဆ က လူတွေကို ငါးပါးသီလ နဲ့ငရဲ နဲ့ ဘာနဲ့ ခြောက်နည်းမျိုးထက် သောက်ချင်းသောက်လျှင် သိက္ခာရှိရှိနဲ့ သောက်တတ်ဖို့ သတိပေးခြင်းက လိုက်နာကြဖို့ နီးစပ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မြင်ပါတယ်ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ သောက်တတ်ပြီး လူများအဖို့တော့ ဟုတ်တာပေါ့ တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ သောက်တတ်ပြီး လူများအဖို့ တပည့်တော် ရည်ရွယ်တာပဲ ။ မသောက်တတ်တဲ့ လူအဖို့တော့ ပိုက်ဆံကုန်မှာ တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ တော်တော်လုံလောက်နေပါပြီ ။ သောက်တတ်တဲ့လူကို မဟုတ်တရုတ် ခြောက်လှန့်ပြီး အဖြတ်ခိုင်းခြင်းထက် မှန်လည်းမှန်တယ် ၊ သဘာဝလည်းကျတယ် ၊ နားထောင်ချင်စဖွယ်လည်း ရှိတယ်ဆိုတဲ့နည်းနဲ့ သတိပေးခြင်းက ပိုပြီး အောင်မြင်ဖို့ မျှော်လင့်
ထိုက်တယ် မဟုတ်လားဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ခြောက်လှန့်ပေးလို့ ပြတ်တဲ့လူများကော မရှိပေဘူးလား တကာကြီးရယ် ။
ရွှေ ။ ။ ငရဲကြီးတယ်ဆိုလို့ မသောက်ဘဲ နေချင်နေမယ် ၊ သောက်တတ်ပြီးမှတော့ ငရဲကြောက်လို့ ဖြတ်တဲ့လူ နည်းပါလိမ့်မယ် ။နာမည်ကောင်းယူချင်လို့သော်လည်းကောင်း ၊ အသောက်လွန်ပြီး သေမှာကြောက်လို့သော်လည်းကောင်း ၊ ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်လို့သော် လည်းကောင်း ဖြတ်ကြတဲ့လူက များပါလိမ့်မယ် ။
ဇင်း ။ ။ ဒါဖြင့် အပြစ်ရှိပုံက ဘယ်လိုရှိတာလဲ တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ (၁) အချိန်မရွေးသောက်လျှင် ယစ်ထုပ်ဖြစ်ပြီး နောင်ဘ၀မှာ ရူးတတ်တယ်ဆိုတာ တပည့်တော် ယုံကြည်တယ်ဘုရား ။
(၂) ပိုက်ဆံကုန်တယ်ဘုရား ။
(၃) လွန်လွန်ကျူးကျူးဆိုလျှင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်တယ်ဘုရား ။ ဒါကတော့ လွန်လွန်ကျူးကျူး သမားများမှပါဘုရား ။လွန်လွန်ကျူးကျူးဆိုတာမျိုးကတော့ ဘယ်နေရာမှ မကောင်းဘူးဘုရား ။ အဗြဟ္မစရိယာ အလုပ်ဟာ ငရဲတော့မကြီးဘူး ။ ဒါပေမဲ့
လွန်လွန်ကျူးကျူးဆိုလျှင် ဒုက္ခရောက်တတ်တာပါပဲဘုရား ။ ကာမဂုဏ်ခံစားမှု ဟူသမျှဟာ ဒီအတိုင်းချည်းပါပဲဘုရား ။ အပြစ်က ခံစားမှုကြောင့် မဟုတ် ။ လွန်ကျူးမှုကြောင့်ပါ ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းဟာ အပြစ် မဟုတ်ဘူးလား တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ တပည့်တော်က ငရဲမကြီးတတ်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ် ။ လူ့ဘောင်မှာ နေရတယ်ဆိုတာ ၀မ်းစာအတွက် အလုပ်လုပ်ရ ၊ဟိုဟာကြောင့်ကြ ၊ ဒီဟာကြောင့်ကြ ၊ သောကဗျာပါဒတွေ များလေတော့ အားလပ်တဲ့အချိန်ကလေးမှာ ဟိုတယ်တက်သူတက် ၊ဘိလိယက်ထိုးသူထိုး ၊ တင်းနစ်ရိုက်သူရိုက် ၊ ရုပ်ရှင် ကြည့်သူကြည့် ကိုယ့်နည်းနဲ့ ကိုယ် ဖျော်ဖြေမှုရှာကြရတာပဲ ဦးပဉ္ဇင်း ။
ဇင်း ။ ။ ဒါတွေ မပါဘဲ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ ဒါတွေ မရှိလျှင် ခြောက်ကပ်ကပ် လူတစ်ယောက် ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ။ ဦးပဉ္ဇင်းများတော့ နေနိုင်တယ် ၊ နေလည်းနေထိုက်တယ် ၊ မနေကြတာကတော့ ဦးပဉ္ဇင်းတို့ အပြစ်ပဲ ။
ဇင်း ။ ။ ဦးပဉ္ဇင်းများဆီ လှည့်လာပြီကိုး တကာကြီးရဲ့ ၊ ဗုဒ္ဓကတော့ ကာမဂုဏ်ကို အပြစ်လို့ဆိုပါလား တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ ဒါက အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပါဘုရား ။ သံသရာဝဋ်မှ ကျွတ်လွတ်ချင်တဲ့ လူများအတွက် ဟောခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွတ်လွတ်ချင်တဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိလို့လဲ ။ ဦးပဉ္ဇင်းရော " သံသရာဝဋ်ဒုက္ခတော " ဆိုပြီးတော့ တစ်ကယ် ကျွတ်လွတ်ချင်တဲ့စိတ် ရှိရဲ့လား ။
ဇင်း ။ ။ ကျုပ်တို့ဆီ လှည့်လှည့်လာတော့တာကိုး တကာကြီးက ။
ရွှေ ။ ။ လှည့်ရတာက တစ်ခြားကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး ဘုရား ။ ဦးပဉ္ဇင်းဟာက ငရဲကြီးမကြီးအကြောင်း ဆွေးနွေးရာကနေပြီးလွတ်မြောက်ရေးတရား အကြောင်း ထည့်ထည့်ပြောတာကိုးဘုရား ။ ဒီနှစ်ခုဟာ တစ်ကန့်စီထားမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုရား ။ လူသာမန်တွေအကြောင်းပြောလျှင် အပါယ်ငရဲက လွတ်ဖို့လောက်ဆိုလျှင် တော်ပါပြီ ။ ၀ဋ်မှ လွတ်မြောက်ရေး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကျင့်ကတော့
တစ်ကဏ္ဍထားသင့်ပါတယ်ဘုရား ။ အမှန်မှာတော့ လူများအဖို့မှာ (အများအားဖြင့်) သံသရာမှာ ကောင်းကောင်းလည်ဖို့ ၊ ရဟန်းများ အဖို့တော့ သံသရာဝဋ်မှ ကျွတ်လွတ်ဖို့ ၊ အဲဒီလို အကျင့်တစ်မျိုးစီ ၊ တစ်ကန့်စီထားလိုက်ပါတယ်ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ သေ အရက်ဟာက ( ပမာဒတရား ) မေ့လျော့ခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်တယ်တဲ့ ။မေ့လျော့တာကော အပြစ်မဟုတ်ဘူးလား တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ လာပြန်ပါပြီ ။ မေ့လျော့ခြင်းကြောင့် မဂ်ဖိုလ်နဲ့ ဝေးတာတော့ မှန်တယ် ။ သို့သော် မေ့လျော့ရုံသက်သက်ကြောင့်တော့ ငရဲကြီးသေးတာ မဟုတ်ဘူး ဦးပဉ္ဇင်း ။ ဒါထက် ပမာဒတရားဆိုတာ ဘာကိုမေ့လျော့ခြင်းလို့ ဆိုလိုတယ် ထင်သလဲဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ မေ့လျော့ခြင်းပေါ့ တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ ဒါန ၊ သီလတို့ ၊ ဥပုသ်စောင့်တာတို့ ဘာတို့လားဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ဟုတ်တာပေါ့ တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ ဗုဒ္ဓ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခါနီးမှာ " ဟန္ဒဒါနိ ဘိက္ခဝေ " ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးသတိပေးချက် တစ်ခု မိန့်တော်မူခဲ့တယ် ၊ ရုပ်နာမ်တရားတို့သည် ပျက်တတ်သော သဘောရှိတယ်တဲ့ ။ အဲဒါကို မမေ့ကြနဲ့တဲ့ ။ ဒါန ၊ သီလတို့အတွက် ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူခြင်း မဟုတ် ။ ဒါတွေကတော့ ဗုဒ္ဓတွေ မပွင့်လျှင်လည်း အပြည်ပြည်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ လူများ ပြုလုပ်ကြစမြဲပါဘုရား ။ နောက်ဆုံး သတိပေးချက်အနေနဲ့ အမောခံပြီး မိန့်တော်မူမည် မဟုတ်ပါဘုရား ။ ပျက်တတ်သောသဘောရှိတယ် ဆိုတာကိုတော့ သတ္တ၀ါတွေက မေ့တတ်လွန်းလို့ ဗုဒ္ဓက အမောခံပြီး နောက်ဆုံး သတိပေးတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ဒါကတော့ လက်မခံလို့ မဖြစ်ဘူး ။ လက်ခံရပေမှာပေါ့ ။ ဒါထက် သုရာမေရယ ဟာ ငရဲမကြီးဘူးဆိုတာကို တကာကြီးဘယ်လိုကြောင့် သဘောပေါက်သွားတာလဲ ။ ဒုစရိုက် ၁၀ ပါး ထဲမှာ မပါလို့ စဉ်းစားမိတာပဲလား ။
ရွှေ ။ ။ အမှန်ကတော့ စိတ်သဘာဝအကြောင်းကို တပည့်တော်တရားအားထုတ်ရင်း လေ့လာရာမှာ အပြုအမူတစ်ခုဟာ ဘာကြောင့် ကုသိုလ်ဖြစ်တယ် ။ ဘာကြောင့် အကုသိုလ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ရှေးဦးစွာ သဘောပေါက်လာပါတယ်ဘုရား ။ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်နစ်နာစေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ပြောဆိုခြင်းဟာ အကုသိုလ် ဖြစ်တယ် ၊ သူတစ်ပါးကို ကောင်းစေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ပြောဆိုခြင်းဟာ ကာမာဝစရ ကုသိုလ် ဖြစ်တယ် ။ ကုသိုလ်မှု ၊ အကုသိုလ်မှုမှာ စေတနာဟာ အကြောင်းရင်း ဖြစ်တယ်လို့ တပည့်တော် သဘောကျလာပါတယ် ။ ဗုဒ္ဓကလည်း စေတနာကို ကံ ဟူ၍ ကောက်ယူရမယ်လို့ ဟောတော်မူတယ် ။ ဒီတော့မှ ဒုစရိုက်၁၀ ပါးထဲမှာ ရှာကြည့်လိုက်တော့ သုရာမေရယ မပါခြင်းကို တွေ့ရလို့ တပည့်တော် အမြင်နဲ့ ကိုက်နေတာပဲဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ နေပါဦး တကာကြီး ၊ အရက်သောက်တဲ့လူဟာ မူယစ်ချင်တဲ့ စေတနာ မရှိဘူးလား ။
ရွှေ ။ ။ ဦးပဉ္ဇင်းက စေတနာနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရောထွေးနေတာကိုးဘုရား ။ မူးယစ်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တော့ ရှိမယ် ။ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ စေတနာ မဟုတ်ဘူးဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ရှင်းပါဦး တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ စေတနာဆိုတာမျိုးဟာ သူတစ်ပါးအပေါ်မှာ ထားရှိခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ် ။ မိမိကိုယ်အပေါ်မှာ ထားရှိခြင်းကို မဆိုလိုပါ
ဘူးဘုရား ။ သူတစ်ပါးအပေါ်မှာ စေတနာကောင်းထားလျှင် ကုသိုလ်ဖြစ်တယ် ။ စေတနာဆိုးထားလျှင် အကုသိုလ် ဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြီးပွားစေချင်တာတော့ လူတိုင်းမှာ ရှိတတ်ပါတယ် ။ သို့သော် ဒါကို ကုသိုလ်စိတ်လို့ မခေါ်နိုင်ပါဘူးဘုရား ။ လောဘစိတ်သာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အရက်သောက်ခြင်းအားဖြင့် သူတစ်ပါးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စေတနာဆိုးသော်လည်းကောင်း ၊ စေတနာကောင်းသော်လည်းကောင်း မပါရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ကုသိုလ် ၊ အကုသိုလ် မကောက်ထိုက်ပါဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ မူးပြီး ရမ်းတဲ့လူကော တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ ဒါက တစ်ခြားပါဘုရား ။ရမ်းတဲ့အပြစ် ရောက်တာပါပဲ ။
ဇင်း ။ ။ သုရာမေရယ သက်သက်နဲ့တော့ အကုသိုလ် မဖြစ်ဘူးပေါ့ တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ စိတ်သဘာဝကို တပည့်တော်ကိုယ်တိုင် လေ့လာလို့ တွေ့ရှိထားတဲ့အတိုင်းမှာတော့ လောကမှာအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ အရည်လည်း မရှိပါဘူး ။ ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ အရည်လည်း မရှိပါဘူးဘုရား။ စေတနာသာလျှင် ကုသိုလ် ၊ အကုသိုလ် ဖြစ်စေပါတယ် ။
ဇင်း ။ ။ သဘာဝတော့ ကျတတပဲ တကာကြီး ။ ကျူပ်တောင် လက်ခံချင်လာပြီ ။ သို့သော် မိရိုးဖလာ သမားတွေကတော့ ကြိုက်ကြရမှာ မဟုတ်ပေဘူး ။
ရွှေ ။ ။ အထူးသဖြင့် အသက်ကိုအသေခံမယ် ၊ သေအရက်ကို လျှာပေါ်မတင်ဖူးပါဘူး ညာဘူး နဲ့ ကြွားနေတဲ့ လူတွေက သာပြီးသဘောမကျ မှာပေါ့ဘုရား ။ သူတို့အသားယူစရာ အလုံးကလေးတစ်ခု လက်လွတ်သွားမှာကိုဘုရား ။ သို့သော် တပည့်တော် စာရေးတဲ့အခါမှာ မိရိုးဖလာသမားတွေအတွက် မရေးပါဘူးဘုရား ။ ကာလာမသုတ်မှာ ဟောတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်း သဘာဝကျမကျကို ကိုယ်
ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရဲတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ရေးပါတယ်ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ဒီလိုဆို တကာကြီးရဲ့စာကို လူများစုက လက်ခံဖို့ ခဲယဉ်းလိမ့်မယ်ပေါ့ ။
ရွှေ ။ ။ တပည့်တော်ဟာ လူပြိန်းများပါ နားလည်အောင်တော့ ရှင်းပြတတ်တယ်လို့ ကိုယ့်ဟာကို ထင်မိပါတယ် ၊ သို့သော် နားလည်ပေမဲ့ မကြိုက်နိုင်တာက ရှိသေးတာကိုးဘုရား ။ နားတော့လည်စေမယ် ၊ သို့သော် လက်ခံဖို့ဆိုတာကတော့ ဥာဏ်အနုအရင့်က ရှိသေးတာကိုးဘုရား ။ အချို့လူများကတော့ သူတို့ကြားဖူးထားတဲ့ အယူနဲ့ မတူလျှင် ခါးခါးသီးသီး ဖယ်ပစ်ချတတ် ကြပါတယ် ။ သူတို့အတွက် တပည့်တော် မရေးဖူးပါဘူးဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ (၁) နဲ့ (၂) ကတော့ ပြေလည်ပါပြီ ။ နံပါတ်(၃) ကျန်သေးတယ် တကာကြီးရဲ့ ၊ တကာကြီးဟာ အခု အရက်သောက်ပါသေးသလား ။
ရွှေ ။ ။ လူပုဂ္ဂိူလ်ချင်းဆိုလျှင်တော့ မေးဝံ့တဲ့ မေးခွန်း မဟုတ်ဘူးပေါ့ ။ သို့သော် ရဟန်းဆိုတော့ မေးနိုင်ပါတယ် ။
ဇင်း ။ ။ ဒီလိုကြောင့်ပါ တကာကြီး ။ တရားအားထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အပြင် ကျမ်းပြုဆရာတစ်ယောက်ဆိုလို့ မေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် တကာကြီးရယ် ။ မဖြေချင်လည်းနေပေါ့ ။
ရွှေ ။ ။ တပည့်တော်ကတော့ မေးသူရှိလျှင် ဖြေဖို့ အသင့်ပါပဲ ဘုရား ။ ဟန်ဆောင်တတ်တဲ့ လူတစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူးဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ရတနာ့သုတ်ထဲကလိုလား ။
ရွှေ ။ ။ ဒါကတော့ ဦးပဉ္ဇင်း ထင်ချင်သလိုထင်ပေါ့ဘုရား ။ တပည့်တော် လျှောက်ထားတာကို ယုံပါနော် ။ ဒါမျိုးမှာ တပည့်တော်မလိမ်ပါဘူး ။
ဇင်း ။ ။ ဘယ်လိုဟာမျိုးမှာမှ မလိမ်ဘူး ဟုတ်လား ။
ရွှေ ။ ။ ဒီလောက်လည်း မဟုတ်သေးဘူးဘုရား ။ တပည့်တော် အသက်သေရမည့် ကိစ္စမျိုးဆိုလျှင် သေရမှာကို ကြောက်ပြီးလိမ်မိမလား မပြောတတ်ပါဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ တကာကြီးက သေရမှာ ကြောက်တုန်းလား ။
ရွှေ ။ ။ ဘယ့်နှယ်ဘုရား ၊ လောကဓံအောင်ပြီလို့ ၀န်မခံနိုင်သေးလျှင် အာဇာနည်များမှတစ်ပါး သေရမှာကို ကြောက်တဲ့လူချည်းပေါ့ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ကိုင်း တကာကြီးနဲ့ အရက်အကြောင်းကို ဖြေပါတော့လေ ။
ရွှေ ။ ။ ငယ်စဉ်တုန်းကတော့ သောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဘုရား ။ ဒါပေမဲ့ တပည့်တော်တို့ လူသိုက်က စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ အိုင်စီအက်သောက်သောက်တဲ့ လူတွေပါ ။
ဇင်း ။ ။ တကာကြီးက အိုင်စီအက်တော့ တယ်အထင်ကြီးသကိုး ။
ရွှေ ။ ။ ဒီ့ပြင်နေရာမှာ ဒီလောက် မဟုတ်ဘူး ။ သောက်တဲ့နေရာမှာတော့ သူတို့လူစုကို ကောင်းကောင်း အတုခိုးတယ် ဘုရား ။
မင်းကြီးရဲ့တောလိုက် စာရေးလုပ်ခဲ့ဖူးတော့ ဂျင်မခါနာကလပ်တို့ ၊ ပဲခူးကလပ်တို့မှာ သူတို့သောက်ပုံတွေကို မြင်ရဖူးသကိုးဘုရား ။တပည့်တော် သရေကျမိတယ် ။
ဇင်း ။ ။ အတိုင်းအတာရှိတယ် ၊ မလွန်စေရဘူး ဆိုပါတော့ ။
ရွှေ ။ ။ ဒါတွင်မကဘူး ၊ နံနက်ခင်းမှာ ဘယ်တော့မှ မသောက်ဘူး ။
ဇင်း ။ ။ ဘာကြောင့်တဲ့လဲ ။
ရွှေ ။ ။ နံနက်ခင်း သောက်တဲ့လူဟာ တစ်နေ့လုံးသောက်ဖြစ်ပြီး ယစ်ထုပ်ဖြစ်သွားတတ်လို့ပဲဘုရား ။ သူတို့က သောက်ကြပေမဲ့ မသောက်ရလျှင် မနေနိုင်ဆိုတဲ့ ယစ်ထုပ်ဖြစ်မခံဘူး ဘုရား ၊ အဲဒါကို တပည့်တော်က သိပ်သဘောကျတယ် ။ တပည့်တော် ယုံကြည်ချက်ကလည်း ယစ်ထုပ်ဖြစ်သွားလျှင် နောင်ဘ၀ မှာ အရူး ဖြစ်တတ်တယ် ။ ရူးသွပ်တယ်ဆိုလျှင် မဂ်ဖိုလ်အတွက် တစ်ဘ၀ဆုံးတော့တာပဲဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ မဂ်ဖိုလ်အတွက်တော့ တော်တော်ကြောင့်ကြစိုက်သကိုး တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ တပည့်တော်က ဆင်းရဲမှာကို မကြောက်လှဘူး ။ ဘ၀ဆုံးရှုံးသွားမှာကို အကြောက်ဆုံးပဲ ၊ ဒါကိုတော့ တော်တော် ငယ်ငယ်ကတည်းက အထူးသတိထားပါတယ် ။
ဇင်း ။ ။ တော်တော်ကြီးလာတော့ ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ ။
ရွှေ ။ ။ ဒင်နာပါတီမျိုးဖြစ်စေ ၊ ကွဲကွာနေတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းသောက်ဖော် သောက်ဖက်များနဲ့ တွေ့ဆုံကြတဲ့ အခါမျိုးလောက်ဖြစ်စေ သောက်ပါတော့တယ် ။
ဇင်း ။ ။ အခုတိုင် ဒီလိုပဲလား ။
ရွှေ ။ ။ အခုတိုင်တော့ မဟုတ်ပါဘူးဘုရား ။ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာပုံကို အဆင့်ဆင့် လျှောက်ထားခြင်းပေါ့ ။
ဇင်း ။ ။ နောက်တော့ကော တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ တရားတွေ ဘာတွေ အားထုတ် ၊ ရဟန်းပြုပြီးလို့ လူထွက်ရတဲ့နောက်တောင် ။
ဇင်း ။ ။ ဒုလ္လဘရဟန်းလား တကာကြီး ၊ ဘယ်လောက်ဝတ်ခဲ့သလဲ ။
ရွှေ ။ ။ ဒုလ္လဘရဟန်း မဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ့်ဟာကို ထင်ခဲ့မိတယ် ၊ ငါတော့ ဒီတစ်သက်မှာ အရက်တော့ သောက်ချင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ။ သို့သော် တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာတော့ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်များနှင့် ဆုံစည်းရာမှာ သောက်ချင်တဲ့စိတ် ဖြစ်လာပြန်တယ် ။ တပည့်တော် မျှော်လင့်တာက သောက်ချင်တဲ့စိတ် ကုန်ပြီထင်တာ ၊ အခုတော့ ရှိနေပြန်တယ် ။ အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်များဟာကာမရာဂ ( လိင်ကိစ္စ ) ကို ပယ်တယ်ဆိုတာ အောင့်ထားခြင်း မဖြစ်ရဘူး ။ စိတ်ကုန်ခန်းသွားခြင်း ဖြစ်ရမယ်လို့ တပည့်တော် တွက်တယ် ။ ကိုယ့်ကို ကိုယ်အနာဂါမ် ဖြစ်တယ်ထင်လို့ အောင့်ထားရုံနဲ့လည်း အနာဂါမ် ဖြစ်တာ မဟုတ်နိုင်ဘူး ။ ကိုင်း ဒီတော့ သောက်ချင်တဲ့စိတ် ရှိသေးတဲ့အတူတူ သောက်ပေဦးတော့ ။ သို့သော် သောက်ချင်စိတ် ပျောက်အောင် အားထုတ်ယူမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ် ။
ဇင်း ။ ။ ဒီတော့ ရှေးရှေးကအတိုင်း သောက်ပြန်ရော့လား ။
ရွှေ ။ ။ ငယ်စဉ်တုန်းက အတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒင်နာပါတီတို့ ဘာတို့လောက်ပါပဲ ။
ဇင်း ။ ။ နောက်တစ်ထစ်က ဘယ်လိုလဲ ။
ရွှေ ။ ။ တပည့်တော်က ကိုယ့်စိတ်ကို စစ်ဆေးတဲ့အလုပ် လုပ်လာခဲ့တာက တော်တော်ကြာပါပြီ ။
ဇင်း ။ ။ ဘယ်လို စစ်ဆေးသလဲ တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ သောက်ချင်တဲ့စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာ တပည့်တော်အဖို့မှာတော့ အစားကောင်းကောင်းနဲ့ တွဲတွဲပြီး ဖြစ်တတ်တယ် ။
ဒီလိုပါဘုရား ၊ တပည့်တော်က အစားကောင်းကြိုက်တတ်တဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် ။ လူတိုင်းကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ တပည့်တော်က ကဲလွန်းပါတယ် ။ ကြိုက်ဟင်း မပါလျှင် မျိုလို့ မကျသလောက်ပါပဲ ။ ပြီးတော့ အသောက်ရဲ့ သတ္တိဟာက ကောင်းတဲ့ အစာတစ်ခုကိုပိုပြီးကောင်းအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဒီတော့ကာ တပည့်တော်မှာ ဘယ်လို ဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ ငယ်စဉ်တုန်းကဆိုလျှင် အိမ်မှာအထူးတလည် ကောင်းကောင်းချက်ထားတဲ့ ဟင်းမျိုးနဲ့တွေ့လျှင် ထမင်း မစားသေးပဲ တစ်ခွက်ပြေးပြီး သောက်လိုက်ရပါသေးတယ် ။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကောင်းနေတဲ့ဟင်းကို ပိုပြီး အရသာ ပေါ်လာအောင်ပေါ့ဘုရား ။ နောက်ပိုင်းကျတော့ အိမ်ကဟင်းကြောင့်တော့ မဖြစ်တော့ပါဘူး ။ သို့ပေမဲ့ အင်မတန်ကြိုက်တတ်တဲ့ တရုတ်စားပွဲကြီးမျိုးကျတော့ အစားကောင်းတာနဲ့ပဲ ရှေ့မှာထောင်ထားတဲ့ပုလင်းဆီကို လက်က ရောက်ရောက်သွားချင်တယ် ။ ဒီအထဲမှာ အနားကလူက ငှဲ့ပေးပြန်တော့ သောက်လိုက်မိတာပေါ့ဘုရား ။
တရုတ်ပြည်သွားတုန်းက ငါသောက်လို့ တော်မထင်ပါဘူးလို့ အောက်မေ့သွားပေမဲ့ အစားကောင်းသွေးဆောင်မှုကြောင့် သောက်ခဲ့မိတာက များတယ်ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ဒီလိုဆို တကာကြီးဟာက ဖြတ်ဖို့ခက်နေပြီကော ။
ရွှေ ။ ။ နေပါဦး ဦးပဉ္ဇင်း ၊ တပည့်တော် လျှောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်း အစားကောင်း သွေးဆောင်မှုကြောင့် သောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလျှင် အစားကောင်း စားချင်တတ်တဲ့ အာသာဆန္ဒကို ဖြတ်ပစ်လိုက်နိုင်လျှင်တော့ အသောက်ပါ ပါသွားမှာပဲလို့ အကြံ ဖြစ်ပေါ်လာတယ် ။
ဇင်း ။ ။ ဘယ်လို လုပ်သလဲ ။
ရွှေ ။ ။ တပည့်တော်ဟာ ကျန်းမာရေးလိုက်စားလေ့ရှိလေတော့ အိန္ဒိယပြည် ဆေးကျမ်းတစ်ခုမှာ ဖတ်ရဖူးတယ် ။ လူတိုင်းဟာကိုယ့်ဝမ်းဗိုက် ( အစာအိမ် ) ကို အလုပ်ပေးလွန်းအားကြီးတယ်တဲ့ ၊ တစ်နှစ်မှာ ရက်သတ္တတစ်ပတ်လောက် လုံးဝ အစာရှောင်သည်ဖြစ်စေ ၊ သို့တည်းမဟုတ် ထမင်းဟင်း မပါဘဲ ဟင်းရွက်ပြုတ်လောက်ချည်း စားနေသည် ဖြစ်စေ ၀မ်းဗိုက် အနားရလို့ ပိုပြိး ကျန်းမာနိုင်တယ်တဲ့ ၊ ဒီနည်းကို နှစ်စဉ် ၀မ်းဗိုက်ရှင်းနည်း ( Annual Cleaning ) လို့ခေါ်တယ် ။ ဒါကို တပည့်တော် သဘောကျလို့ တစ်ပတ်လောက် လုပ်စမ်းကြည့်ရာမှာ ကျန်းမာရေး အတွက် သာမက အစားကောင်းခင်မင်တတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးဟာလည်း လျော့ဆင်းသွားတာကို တွေ့ရတယ် ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပြုတ်ချည်း တစ်ပတ်လောက် စားနေနိုင်တယ် ဆိုကတည်းက ဟင်းမကောင်းတာလောက်တော့သည်းခံနိုင်သွားတော့တာပါပဲဘုရား ။ ဟင်းမကောင်းခြင်းကို သည်းခံနိုင်လျှင် ဟင်းကောင်း ခင်မင်တတ်ခြင်းဟာလည်း လျော့ဆင်းရ
တော့တာပဲဘုရား ။ အဲဒီလိုချည်း တစ်လမှာ တစ်ပတ်လောက် နှစ်လမှာ တစ်ပတ်လောက် လုပ်သွားတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ကာယဟာ ပိုပြီးပေါ့ပါး ဖျတ်လတ်လာရုံ မက အစားကောင်း ( ရသာရုံ ) နှင့် ပတ်သက်လို့ အာသာငမ်းငမ်း ရှိတတ်တဲ့ ၀ါသနာဟာလည်း ပျောက်လုမတတ် ဖြစ်သွားပါတယ်ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ လုမတတ်ဆိုတော့ လုံးလုံးကြီးပျောက်တာ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ။
ရွှေ ။ ။ သူတစ်ပါး နည်းတူတော့ ရှိသေးတာပေါ့ဘုရား ။ တပည့်တော်က ရသာရုံဘက်မှာ လူအများထက် ကဲလွန်နေတော့အစွန်းကလေး တိပစ်လိုက်သလိုပေါ့ ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ အစားကောင်းကောင်းစားဖို့ ငမ်းငမ်းတက် မဖြစ်တော့ကာ သောက်ချင်တဲ့ တမ်းတမှုပါ ပြုတ်သွားလေရောလား ။
ရွှေ ။ ။ တပည့်တော် အဖို့မှာတော့ ပြုတ်သလောက်ပါပဲဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ တကာကြီးရဲ့ ဖြတ်နည်းကလည်း မှတ်သားလောက်ပါတယ် ။ နေပါဦး ၊ တကာကြီးဟာ အိုင်စီအက်များလို စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ သောက်တတ်တယ်ဆိုပြီး နောက်ဆုံးမှာ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို လုပ်နေရသေးသလဲ ။
ရွှေ ။ ။ အကြောင်းတွေက တော်တော်များပါတယ်ဘုရား ။ ပထမအကြောင်းက တပည့်တော်ဟာ ခပ်ရွယ်ရွယ်တုန်းကတော့သူတစ်ပါးကို မထိခိုက်လျှင် ဘယ်သူကဘာထင်ထင် လုပ်ချင်တဲ့ ၀ါသနာရှိသော်လည်း အဘိုးကြီးပိုင်းရောက်လာတော့ ထပ်ပြီး စဉ်းစားလာတယ်ဘုရား ။ ကိုယ်က တရားသမားလည်းဆိုသေး ဒင်နာပါတီလေး ဘာလေးမှာ တစ်ခွက်တစ်လေ သောက်လိုက်မိတယ်ဆိုလျှင် လူကို အထင်သေးတာထက် တရားကို အထင်သေးသွားမှာ စိုးတဲ့အတွက် ဒုက္ခခံပြီး ဟင်းရွက်ပြုတ်နဲ့ ဖြတ်ရတာပါဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ သာဓုပါဗျာ ၊ ဒီ့ပြင်ကောဗျ ၊ ဒီဟာက ဇိမ်တစ်မျိုးရှိတယ်ဆို ။
ရွှေ ။ ။ ငယ်စဉ်တုန်းကတော့ အဲဒီဇိမ်ကိုလည်း ကြိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ တရားအားထုတ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ အလိုရှိတဲ့အခါမှာအဲဒီ ဇိမ်ထက် ကြည်လင် သန့်ရှင်း အပြစ်ကင်းတဲ့ ဇိမ်မျိုးကို ခံစားနိုင်လေတော့ သူ့ ဇိမ် အတွက် မမက်မောတော့ပါဘူးဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ဒါဖြစ့်လည်းဗျာ အဲဒီ ဇိမ် နဲ့ပဲ ဖြတ်ပါတော့လား ၊ အစားဆင်းရဲခံပြီး ဟင်းရွက်ပြုတ် လုပ်နေရသေးသလား ။
ရွှေ ။ ။ ဒီ ဇိမ် နဲ့ချည်း ၂၄ နာရီနေလို့ မရဘူးပေါ့ဘုရား ။ စားတဲ့အချိန်မှာ မျက်မျက်ကောင်းကောင်း စားချင်တဲ့ လောဘကရှိသေးတာကိုး ဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးလို့ ပြောပါတယ် ။ ဒီ့ပြင် အကြောင်း များကော တကာကြီး ။
ရွှေ ။ ။ ဒုတိယအကြောင်းတစ်ခုကတော့ တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာ အနှောင့်အယှက် နည်းနည်း တွေ့ရလို့ပါဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ သိပ်မမူးဘဲ စားကောင်းရုံလောက်ဆိုလျှင် ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လား ။
ရွှေ ။ ။ တရားအားထုတ်ဖို့ အလုပ်မရှိတဲ့ လူများအဖို့မှာတော့ မှန်ပါတယ် ။ တရားအားထုတ်နေတဲ့ လူများအဖို့မှာတော့နည်းနည်းလောက် သောက်မိလျှင်ပဲ စိတ်ထဲမှာသိပ်ပြီး မသန့်ရှင်းဘူးဘုရား ။ ကြည်လင်မှုလည်း နည်းနည်းလျော့တယ် ။ တပည့်တော်က အတွေးနဲ့ ပြောခြင်း မဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ်တွေ့ပါဘုရား ။ သတိနည်းနည်း လွတ်တတ်ပါတယ် ။
ဇင်း ။ ။ သိပ်မူးမှ သတိလစ်တာ မဟုတ်လား ။
ရွှေ ။ ။ အဲဒီ သတိမျိုးကို မဆိုလိုပါဘုရား ၊ နာမ်ရုပ်ကို ရှုဆင်ခြင်တဲ့ သမ္မာသတိ လို့ ဆိုလိုပါတယ် ။
ဇင်း ။ ။ ဟုတ်ပြီ ၊ ပမာဒတရားကို ဆိုလိုတာပေါ့ ။ ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားက ဟောခဲ့တာကိုးဗျ ။ သုရာမေရယ မဇ္ဇပမာဒဋ္ဌာနာတဲ့ ဗျနော် ။
ရွှေ ။ ။ စောစောကတည်းက တပည့်တော်က ဒါကို လျှောက်လိုခြင်းပါဘုရား ။ မေ့လျော့ရုံ သက်သက် နဲ့တော့ အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူး ။ သို့သော် တရားအားထုတ်ရေးအတွက်တော့ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ပါတယ် ။
ဇင်း ။ ။ ကြိုက်ပါ့ဗျာ ၊ ဦးပဉ္ဇင်းတို့ကတော့ ဒီလို ၀န်ခံလျှင် သဘောကျတာပါပဲ ။
ရွှေ ။ ။ တကာကြီး ရွှေဥဒေါင်းက အရက်သောက်တာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ရေးတယ်ဆိုတဲ့ လူများကို ရှင်းပြလိုက်ပါဘုရား ။စလောင်းဖုံး ၂ ချပ်ကို တီးလျှင် ကွဲတတ်တာမှန်တယ် ၊ ကျားကိုက်တတ်တယ်ဆိုတာတော့ မမှန်ဘူးလို့ ဆိုလိုခြင်းပါ ။ ဒီအကြောင်းတွေကို တပည့်တော် ဖြောင့်ချက်ထဲမှာ ရေးပြရခြင်း အကြောင်းတစ်ခုကတော့ မသောက်တတ်တဲ့ လူတွေကို သောက်ချင်အောင် မဟုတ် ၊
အရက်ကလေးတစ်ခု ရှောင်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာတရား မကပ်ဘဲ လုပ်ချင်ရာတွေလုပ်တဲ့ လူများက အသားယူနေကြတာတွေကို ရွံ့တွံတွံရှိလို့ မှန်တဲ့အတိုင်း တင်ပြခြင်းပါဘုရား ။
ဇင်း ။ ။ ကျေနပ်ပါပြီ တကာကြီး ၊ လိပ်ပတ်လည်သွားပါပြီ ။
ကဲ ....မိတ်ဆွေတို့ ကော ဟိုဦးပဉ္ဇင်းလို လိပ်ပတ်လည်ပါရဲ့လား ။
ရွှေဥဒေါင်း ၏ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်ပါစေ နှင့် အတွေးအမြင် ဆောင်းပါးများ မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။
မေးထဲရောက်လာတဲ့ဆောင်းပါးကို သဘောကျလို့ ကူးယူတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted by Ven. Vilasagga at 8:53 PM0comments